Indlela yokwenza ikhonkco lephepha: iminyathelo ngesinyathelo se-step, umzobo, ividiyo
I-cone yileli nani eliselula lejometri. Kodwa ungenza ngokwakho ngephepha okanye amakhadibhodi. Eli nqaku linokusetyenziswa kwiinjongo ezahlukeneyo. Ngokwakheko kulula ukwenza iifowuni zeholide okanye umthi wonyaka omtsha, iipesele kwiiskese okanye isiseko sokubunjwa. Kukho iindlela ezininzi. Ngokusekelwe kwiifoto kunye namavidiyo angezantsi, akuyi kuba naluphi na ubunzima kwinkqubo yokudala i-cone yephepha. Into ephambili ukulandela ngokucacileyo icebo lendlela ekhethiweyo kwaye yonke into iya kuvela ngendlela efanelekileyo kakhulu.
Izixhobo kunye neempahla eziyimfuneko
Ukwenza ikhonkco lephepha ngezandla zakho, kuya kufuneka ulungiselele izinto ezithile kunye nezixhobo:
iphepha okanye iphephabhodi;
I-PVA yokubambisana okanye inguqu yokubhala (okanye iteksi yokumathisela);
Kwinqaku! Ungasebenzisa ikhampasi yesikolo ukuba kulula ukudweba isangqa esiqhelekileyo.
Inyathelo ngeNyathelo Imiyalelo yokwenza iPhepha lePhepha
Xa udala i-cone ukusuka kumaphepha, akuyi kubakho ubunzima obunzima, ukuba kufikelele kumsebenzi ngokufanelekileyo. Umyalelo olula wezinyathelo kunye nesiteli uza kunceda kule nkqubo.
Ukuqala oko kuyimfuneko ukukhetha iphepha eliphambili lokwenza i-cone. Unokuthatha izinto eziqhelekileyo, ezijoliswe ekufakeni amaphepha eencwadi. Akunqatshelwe ukusebenzisa i-paperer yamaphepha emaphepha. Isisombululo esona sisisigxina - esinobukhulu kwaye esithengiyo-ngumbala wekhadibhodi enemibala eguquguqukileyo emthunzini, ngokungaxhatshali kwizinto zangaphandle kwaye ibambelele kakuhle. Kukwiphepha lezinto eziza ku funeka uzenze isangqa nge ipensela okanye isangqa.
Thabatha ingqalelo! Ububanzi bebhanki elidwetshiwe liza kubeka iiparitha zekamva elizayo.
Emva koko, unqumle ngokuqinileyo isangqa leshidi elikwiphepha elimakwe.
Ubume bephepha eliphambili luhlukaniswe ngamaqabane amane alinganayo usebenzisa ipensela nomlawuli.
Ngoku kuyimfuneko ukugqiba ubungakanani bekontoni yephepha elizayo. Ukuba usebenzisa esinye seziqendu zesangqa, i-craft iya kuba ibukhali kwaye ilula. Kodwa unokwenza ikhonki kunye nezantsi kunye nobude obude. Kule meko, yonke into esebenzayo kunye nesigaba esisodwa esinqunyiwe sisetyenzisiweyo. Ukufumana ubungakanani bekoni yesilinganiso, kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe umgaqo "wegolide intetho", oko kukuthi, kuyimfuneko ukuthatha isigamu somfanekiso.
Thabatha ingqalelo! Indlela yokugqibela ikuvumela ukuba wenze iiboni ezimbini ukusuka kwisangqa esinye ngexesha.
Kule nqanaba, kufuneka usebenzise iglue. Ingxenye ebangelwa kwiphepha, eliye lacinywa ngaphambili, lithathwa kwimida. Kufuneka zizinze kunye ne-PVA glue. Ukuba i-glue yayingekho, ungasebenzisa itheyipu okanye isitya. Inketho yokugqibela iyona elula, njengoko iya kuthatha kuphela ukuchofoza.
Ngokuqhelekileyo, i-cone yephepha ingaqwalaselwa. Umele ulinde de i-glue idle. Unako (kodwa kungenjalo) kwakhona wenze isahlulo sephepha.
Njengoko uyakubona, ukwenza i-cone elula yamaphepha ayikho into eyinkimbinkimbi. Ukubunjwa kwempahla enjalo akuyi kuthatha ixesha elide, kwaye ukuba ukwesaba ukwenza iipazamo kwinkqubo yomsebenzi, awukwazi ukusebenzisa kuphela iskimu, kodwa kunye nevidiyo efumaneka ngezantsi.
Naliphi na ikona elenziwe ngokusekelwe kwiphepha lephepha lingenziwa yantlandlolo, eqaqambileyo neyodwa. Oku kubaluleke ngokukhethekileyo ngexesha lokudala ukudala indawo yokuzonwabisa. Indlela elula ukuyihlobisa umboniso wakho omhle ngomzobo. Kule ndlela ungasebenzisa iipensele, iipende, amanqaku okanye i-pastels. Kwiqhonkqo zonke iintlobo zeepateni ziya kubonakala zibalaseleyo, umzekelo, i-vortices, i-asterisks, i-zigzags, i-monogram. Unokwenza unobhala ovuywayo: luya kubonakala lukhanyayo kwaye lubalabala.
Kukho enye inketho yokuhlobisa i-cones. Kwiphepha elilodwa lephepha kukufanele ukupenda into ethile uze uyibala. Iingoma ezigqityiweyo zinqunywe kwaye zifakwe kwi-substrate. Ndiyabulela kule nkqubo, ukuyila kuya kuba mnandi kwaye kuyamnandi. Ngenjongo efanayo unokusebenzisa izitikiti ezilungiselelwe. Ukuba unqwenela, ungasebenzisa izibhinqa, ubuhlalu, intambo kwipuphu okanye iphepha, i-scotch kunye nezinye izinto eziqhelekileyo zokuhlaziywa ezenziwe ngezandla zakho ngendlela yesandla esenziwe ngesandla.
Kubalulekile! Kodwa kufuneka ikhutshwe engqondweni ukuba okokuqala kufuneka uyihobise umsebenzi, kwaye emva kokuba uqale inkqubo yokudala. Indlela enengqiqo izakuphepha ezinye zeengxaki ezinxulumene nomlo wemveliso efunyenweyo.
Ividiyo: indlela yokwenza ikhonteli lephepha ngezandla zakho
Ukuba unemibuzo malunga nokwenza ikhonkco lephepha ngezandla zakho, sincoma ukuba ubone iividiyo ezingezantsi.
Ebisu kunye neAaikoku - oothixo benenhlanhla kunye nolonwabo kwi-feng shui
Indlela yokuguqa ubude ukusuka kumabhondi
Iingcebiso ezilungelelanisa umfoto wezithombe
Ukuhlolwa kwamabhinqa abakhulelweyo ukufumanisa i-chromosomal engafanelekanga yefestile, ukuhlolwa kwesikhashana
Iziganeko ezimangalisayo kunye nemithandazo yokukhulelwa
Amabhati okuhamba ngeenyawo ukusuka ekukhathala komlenze ukusuka kumachiza omntu
Iingcamango eziqhelekileyo malunga nabathandi
I-manna iphariji kwi-microwave
Ukutya okwelapha ukutyunjwa
Izindlela ezi-8 ezivakalayo zokuhlala zifudumala xa ushushu
Borscht ukusuka kwi-sauerkraut
Ikhalenda yeLunar yomlimi weloli ngo-Agasti 2016 kwiNgingqi yaseMoscow, i-Urals, iSiberia, i-Ukraine kunye neBelarus